Ịchọrọ iwepụ data? Izu Izu Uzo Di Uzo Di Uzo I Kwesiri Inyocha Dika Okpukpo
Nchịkọta weebụ bụ usoro mgbagwoju anya juputara na ọtụtụ ngwaọrụ 7). Ngwaọrụ ndị a na-ejikọta weebụsaịtị dị iche iche n'otu ụzọ ahụ anyị si eme mgbe iji ihe nchọgharị dị ka Firefox ma ọ bụ Chrome. Ọzọkwa, mmemme weebụ na-egosipụta data ndị e wepụtara na usoro nhazi. Ha na-enyere aka ịmepụta ndị ọzọ na-eduzi ma na-eme nke ọma karịa ọrụ anyị.
Ngwaọrụ Ntanetị kachasị mma:
N'ebe a, anyị enyela ndepụta nke ngwá ọrụ weebụ kachasị mma na ndị bara uru, ụfọdụ n'ime ha nweere onwe ha mgbe ndị ọzọ kwụrụ ụgwọ.
Bubata. Ee maara ya maka nkà na ụzụ ya. Ngwaọrụ ahụ kwesịrị ekwesị maka ọkachamara na ndị na-abụghị ndị ọkachamara. Ngwa ngwá ọrụ weebụ a abụghị naanị nweta ma kpochapụ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ mana ọ na-ebupụtakwa data amịpụtara na CSV. Ọtụtụ narị puku peeji nke PDF na faịlụ PDF nwere ike iwepụ n'ime otu awa na mbubata. Ee. Isi okwu a bụ na ịkwesighi ide koodu ọ bụla. Kama, ngwá ọrụ a na-ewuli ihe karịrị 1000 APIs dabere na ihe ị chọrọ.
2. Dexi. Ee
Dexi. A na-amarakwa na ọ bụ CloudScrape. Nchịkọta weebụ a na ntinye akwụkwọ data na-adaba maka ndị mmemme na freelancers. A maara ya nke ọma maka nbudata na nchịkọta ihe nchọgharị ya na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịnweta ma budata data amịpụtara na draịvụ ike gị. Ọzọkwa, nke a bụ nnukwu ntanetị weebụ nke nwere ike ịchekwa data na Igbe ọ bụla. net ma ọ bụ Google mbanye. Ị nwekwara ike mbupụ data gị na CSV na JSON.
Webhouse. io bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ịtụnanya ma ọ bụ ihe mgbawa nchọgharị web-scruping applications. Ọ na-enye ohere data dị mfe ma dị mfe iji nweta data a mapụtara ma nwee ike ịdee ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ibe weebụ n'otu API. Ị nwere ike iwepu data gị n'ụzọ dị mfe site n'iji Webhouse. wepụta ma zọpụta ya na ụdịdị dị ka RSS, XML, na JSON.
Naanị $ 25 kwa ọnwa, ị nwere ike ịnweta ihe niile dị ịtụnanya nke Scrapinghub. Nke a bụ ngwa ngwa igwe nke na-emezu data gị mmịpụta chọrọ na ụzọ ka mma. Scrapinghub kacha mma mara maka ya smart proxy rotator nke na-awagharị site na ebe nchekwa weebụ jikwaa.
5. Onye na-ahụ ihe na-ahụ anya
Onye na-ekiri ihe nkiri bụ ihe ọzọ nchịkọta data na nchịkọta ọdịnaya. Ọ na-ewepụta ozi sitere na weebụsaịtị dị iche iche, a na-ebute ihe ndị a na ozugbo. Ị nwere ike mbupụ data gị akpọrọ iji hazie dị ka SQL, JSON, XML, na CSV.
6. Ọpụpụ Hub
Ọ bụ ihe mgbakwunye Firefox nke nwere ike ime ka ntanetị weebụ anyị dị mfe site na nchịkọta data ya.Ogbenye Hub bu kwa ndi amara n'etiti ndi mmeputa ihe na ndi mmepe mmepe; ngwá ọrụ a na-echekwa data gị na usoro ndị a pụrụ ịdabere na ya, na-enye interface na-arụ ọrụ enyi na ọrụ kachasị mma.
7. Ihe nyocha
Ọ bụ eziokwu na Scraper nwere njedebe data ntanetịpụ, ma nke ahụ apụtaghị na ọ gaghị eme nnyocha ịntanetị mfe. Nke bụ eziokwu, Scraper bụ nke mbụ nhọrọ nke ụlọ ọrụ dị iche iche, ndị SEO ọkachamara, na ngwa mmepe. Ị nwere ike idetuo data na tebụl ma ọ bụ chekwaa ya na spreadsheets dị iche iche dị ka ọchịchọ gị. O di nwute, ngwá ọrụ a adịghị agbawa ibe weebụ gị.
8. Ogwe 80
Ọ bụ ngwa ngwa ntanetị siri ike, nke nwere ike, na nke bara uru. Ị nwere ike ịhazi 80 ụkwụ dịka ọ bụla ị chọrọ, ngwaọrụ a na-ezute ozi achọrọ na sekọnd ole na ole.
Spinn3r fetches data sitere na mkpokọta weebụ, netwọk mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ya, ọpụpụ akụkọ na ntanetị onwe, na-echekwa data gị na usoro JSON. E wezụga ya ebube data mmịpụta Njirimara, Spinn3r ana achi achi nchebe na nzuzo gị data na-adịghị ekwe ka spammers zuo ya.